Dhalinyarada Dunida Saddexaad Ma Boodh Gidaar Ku Yaalbaa, Maxaa Badey Iney Dhigooda Horu-marey Isu Qoraan Yagoo Nool. – somalilandtoday.com
Dhalinyarada Dunida Saddexaad Ma Boodh Gidaar Ku Yaalbaa, Maxaa Badey Iney Dhigooda Horu-marey Isu Qoraan Yagoo Nool.
Dhalinyaradu waa furaha bulsholaga furo ama lagaxidho, Aduunka hadiila cabirayo bulsho-weynmeel ku wadanool, Hal-beega lagaqiyaasqaataa waa dhalinyaradoodu sidayula haystaan noloshaiyo waliba xadigaQaab-fikirkooda, Maxsuulkuna labauun baymidnoqdaan kuwa lagufarxo oo waxsoo kordhiyey amakuwa laga naxooo aan waxbasoo kordhin islamarkaana faashiliin ah.
Dunida saddexaad ayuuahaa Baytal-qasiidkii qormadaniiyo waliba dhalinteeda,Caalamka intaa leegcida laga shaqeystaaee aan wax-soo-saarbuuran lahayni waaQaarada Afrika ooloogu yeedho dunidasaddexaad, Hadaba qaaradanwaxa ku dhaqandhalinyaro fara-badan kuwaasioo aan aduunkaku lahayn magac, mukhatiricnimo, muhandisnimoiyo waliba mu,alifnimoshay laysla qaatey.
Dhalinta dunida saddexaadculuun way leeyihiinaqoonta ay bartaanama,aha mid yagaanfacaysa, Arki maysidmid kaliyoo waxhindisaumadu kudiirsato uu kasoo jeedaa, Waawada Aqoon-yahano aaneyculuuntoodu u goynaynxal u helida mushkiladahahaysta, Aduunkawaxba umasheegaan yaga uunbaa loo sheegaa.
Dhalinta dunida saddexaadwaxay ka helaandaawashada dhalinyaro dhigoodaah oo shaqaysanaya,Kuwaasi oo layskajeediyey lanajiheeyeywaa dhalinta kubadaama balooniga ciyaarta,e, Waxa lagadhigay kuwa caalamiyakuwa ugu badanee ku mashquuleyee dankastau seegay waadhalinta dunida saddexaadama Afrikaanka ooyagu ah khabiirofalan-qeeya kuwaa shaqadoodawata.
Dhalinta dunida saddexaadayuun baa lagasoo helayaa sidiigidaarada lagu qoroboodhadhka shirkadaha magacyadooda oo kale,Qaaryagoo noolqof isu qoreyoo u ahxayeysiis, Tusaale ahaanwiil baa taageeraisagoo muslim ah ciyaartoywaxa uu iibsanayaagaranmagaca ciyaartoygaasi kuqoran yahay, Wuuxidhanayaa markuu ciyaarayoninkaa uu magaciisasitaa hadaba qofkanimaanu noqonaynsidiigidaar boodh kuyaala.
Dhalinta dunida saddexaad waxaykaga duwan yihiinkuwa kale ee caalamkawaa umada kaliyee xidhatadhar magac qofkale kuqoranyahay, Aduunka adigaoo cid taageereu ah maxidhan kartid garanuu ku qoranyahay magaciisu, Waayowaxay aaminsan yihiininshakhsiyan qofkaasihoos isu dhigaywaxay xidhaan calaamadaay taageersan yihiinoo bilaa magaca.
Dhalinta dunida saddexaadwaa dhalin lamashquuliyey oo loosameeyey wax lagaga xadidayofikirka iyo waxsoo kordhinta,Waxaadmoodaa inay inyari imika waxsoo fahmayso wadamadaqaar baa yeeshaydhalinyaro mukhtariciin ah, Kuwaasinalama buun-buuniyo taariikhdanalaguma daro eedalalkooda ayuun baalaga yaqaanaa.
Dhalinta dunida saddexaad waadhalinyarada kaliyaatee dhigoodahagradey waqtiga ugubadan galiya hadaytahay ciyaaro iyoaflaam,Kuwaasi hortaway shaqeysanayaan laakiinkuwa afrikaanka ahee aduunka waxcusub keena amashaqaysanaya kumamashquulaanmana bartaan xataama daneeyaan waxayu arkaan waqtilumis iyo waxaan waxba kasoo galayn.
Dhalinta dunida saddexaadma xusto taariikhdu manalaha halyeyo sidakuwa reer galbeedloo buun-buuniyo oomacaa manhajyadataariikhdalagu daro, Dalalkahoru-marey waxay kadhigaan dadkooda aqoonla barto kuweenanafrikaankuna may fahminwaqtigiibaintaad baranaysoayuu kaaga dhamaanayaa,Waa ka sheekayntanin shaqaysanaya ama ku daalistanin aan kuuogayn.
Dhalinta dunida saddexaadwaxa laga dhaadhiciyeyin afrikaanku agnaanyahay oo anuuwaxba garanayn, Ismabuun-buuniyaan, ismaqiraan,isma dhiiri-galiyaan, Waxamanhaj u ahin jinsigooga iyoisirkooda laga mashquulo loonamihraabo kuwo kaleoo aan xataawaxbadan soo kordhinbalse yagu ku guulaystayiney aduunka waxoodanka dhaadhiciyaan.
Dhalinta dunida saddexaadimika ku noolmay helin aqoontiiwaqtigii mustacmarada ayheleen fucaada waalidkoodamahogaamiyayaashoodu kamidka yihiin, Waxayku soo beegmeenafrika xorawdey oohadana xiniban kanaxayiran dhicana duruqafikirkaiyo aqoonta,Waayo in yarayaa loo qadhiidheyhalkaasina ha soodhaafina ayaa lagutaasi baanay qaateen.
Dhalinta dunida saddexaadwaa kuwa rajo-dhigeyoo noqdey boodhgidaar ku yaala ooqof nooli iskuqoro, Waxay naadiyaanamanaawilaan inaydagaladooda ka tacabiraanama ka haajiraan,Halkaa gab ayeybaneeyeen waxa isweydiin leh ayaabuuxinaya halkaaayka baxeen, amawaa ayo Assetkau yaala umadahoodaee bari hagayaa??????????.
Qalinka: C/raxmaan SayidFaarax (Jeesto)